Nhau - Iyo 129th Session yeCanton Fair yakarongwa pamhepo kubva muna Kubvumbi 15 kusvika 24
China Kunze uye Export Fair, inozivikanwawo seCanton Fair, yakavambwa muna 1957. Inogadziriswa neBazi rezveMabhizimusi rePRC neHurumende yeVanhu vePurovhinzi yeGuangdong uye yakarongedzwa neChina Kunze Kwekutengesa Center, inoitwa yega yega chitubu uye matsutso mu Guangzhou, China.
Mugore ra2020, kurwisana nedenda repasi rose re coronavirus uye kutengeserana kwakanyanya pasi rose, State Council yakafunga kubata Canton Fair pamhepo.Ichi chisarudzo chakakosha chakaitwa nehurumende yepakati neHurumende yeKanzuru kurongedza kudzivirira nekudzivirira uye hupfumi nekusimudzira magariro. 26,000 maChinese nevekunze varatidziri vakaratidza zvigadzirwa mukushambadzira kwehupenyu uye vakaita online kutaurirana kuburikidza neiyo chaiyo Canton Fair. Vatengi vekunze kwenyika vanobva kunyika mazana maviri nemakumi manomwe nenhanhatu vakanyoreswa uye vakashanyira Fair; mutengi sosi nyika yakasvika kurekodhi yakakwira. Iyo chaiyo yeCanton Fair yakavhenekera nzira nyowani yekusimudzira kutengeserana kwepasi rose, uye yakaisa hwaro hwakasimba hwepamhepo kusangana kwakabatana.
Uye ikozvino, inguva yeiyo 129th China Import and Export Fair, yakabata online kubva Kubvumbi 15 kusvika 24, 2020, Mumazuva gumi chaiwo kuratidzwa
Isu, Taizhou Zhonghan Zvishandiso CO. LTD, chete yakasarudzika musiyano saizi yematombo anotenderera, anosanganisira 20mm, 24mm, 26mm, 28mm, simbi dzemagetsi, sando dzinotenderera dze38mm uye sando dzekuparadza uye 20mm, 26mm tambo dzesimbi dzesimbi, uye isu zvakare tine hurongwa kuvhura iwo ma rotors musangano kugadzira ese marudzi ese ma rotor edu nezvimwe zvigadzirwa, uye mune ramangwana zvakare vane rimwe zano re Delevep nekutsvagisa mamwe akawanda akasiyana maturu emagetsi eanonyatso kuzivikanwa mhando
YOKUDZIDZA KUKUNDA HWEMAHARA, SARUDZA isu ZHONGHAN
Isu takamirira iwe nguva dzose uye Tichaedza nepatinogona napo kuti tikutsigire nemhando yepamusoro uye nebasa rakanaka!
Nenzira, isu tichaendawo kumusangano wakanaka we26 HARDWARE FAIR muYongkan pa9.26th-9.28th, 2021 uye iyo 35TH CHINA INTERNATIONAL HARDWARE FAIR muShanghai pa6. 23-25th, 2021 uye nyika dzepasi rose zvakanaka The International Building Materials Hardware Exhibition, Sao Paulo, Brazil, 2021 uye EISENWARENMESSE FAIR, muCologne, Germany, mamwe mashoko ndapota nyatsoteererai kwatiri